Kuunza mota kubva kuAustralia kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Uri kutarisa kuendesa mota yako yeAustralia kuUnited Kingdom?
Tinogona kubata maitiro ese ekupinza mota yako kubva kuAustralia, kusanganisira kuburitsa kunze, kutumira, clearance yetsika, UK inland trucking, kuteedzera kuyedza uye kunyoresa kweDVLA. Isu tinobata maitiro ese, tichikuchengetera iwe nguva, dzichikunetsa uye zvisingafanoonekwe mitengo.
Nei uchisarudza isu kuti titore mota yako kubva kuAustralia?
Kutumira (Ocean mitoro)
Kune mota dzinobva kuAustralia, tinogona kubata izvo kutumirwa panzvimbo yako. Izvi zvinosanganisira kuronga kwemotokari dzako mugungwa-kutakura, kurodha, uye kuburitsa.
Kubviswa kwetsika (NOVA)
Maitiro ekubvisa tsika uye mapepa anodiwa kujekesa mota yako anobatwa isu pachedu kuti ive nechokwadi chekuti mota yako haitore imwe mari yekuchengetedza.
Pakati pega pega nhanho yekuunzwa kwemotokari, isu tiripo kuronga zvese zvine chekuita nemukati mekunze panzvimbo yako kuona kuti hapana kunonoka.
Kugadziriswa & kuyedzwa
Iyo mota inoshandurwa uye kuyedzwa pachedu kutevedzera muUnited Kingdom. Mushure meizvozvo kuyedza kwese kunoitwa kunoitwa panzvimbo yedu yekuyera yeIVA yekuyedza nzira.
Kana imwe mota yako yeAustralia yango teerera tinochengeta mapepa ese anodikanwa kunyoresa mota yako muUnited Kingdom uye mota inogona kuunganidzwa kana kuendeswa.
Kubva pamakore ekuunza mota kubva kuAustralia kuenda kuUK, isu takanyatso sarudza nyanzvi dzekutakura mota dzinoshanda kunze kwemahombekombe makuru muAustralia kubata mota dzevatengi vedu.
Isu tinopa muunganidzwa unoyemurika mukati memiganhu yeguta reBrisbane, Sydney, Melbourne nePerth asi tinogona kuwedzera koti kuti utore mota yako kubva kure kuAustralia sekukumbira kwako.
Isu tinowanzo takura mota tichishandisa zvakagovaniswa midziyo, izvi zvinokutendera kuti ubatsirikane kubva pamutengo wakadzikiswa wekupinza mota yako kuUK nekuda kwekugovana mutengo wemudziyo nedzimwe mota dzatiri kuendesa panzvimbo yevatengi.
Kutumirwa kweContainer inzira yakachengeteka uye yakachengeteka yekupinza mota yako kuUK uye kazhinji ndiyo inonyanya kudhura. Kana iwe uchida yakatsaurirwa 20ft mudziyo wemotokari yako ndokumbirawo ubvunze, sezvo isu tichipawo izvi kune vatengi vedu.
Yakawanda sei mutero yauchazoda kubhadhara kupinza mota yako yeAustralia kuUK?
Pakununura mota kubva kuAustralia, kune nzira ina dzakasiyana dzekubvisa tsika muUK, zvinoenderana nekwakatangira mota, zera uye mamiriro ako:
Kana ukapinza kunze motokari inogadzirwa kunze kweEU, uchachajwa 20% VAT uye 10% yemutero.
Kune rimwe divi, Kana iwe ukapinza mota inogadzirwa mukati meEU, unofanirwa kubhadhara makumi maviri muzana VAT uye £20 yebasa.
Kana iwe ukapinza mota inodarika makore makumi matatu uye isati yanyanya kuvandudzwa, unochajwa 30% VAT chete.
Uri kudzokera kumashure semunhu anotamisa achienda kuUnited Kingdom? Kana iwe uine yako mota kweinopfuura mwedzi mitanhatu uye uine humbowo hwekugara muAustralia uchitambanudza kumashure gumi nemaviri mwedzi - ipapo kupinza kwako muzviitiko zvakawanda hakuzovi pasi pekupinza mutero nemitero.
Mota yeAustralia inogadziriswa uye nyora mvumo
Kune mota dziri pasi pemakore gumi ekuzvarwa, pakusvika kuUK, mota yako inozofanira kutevedzera UK mhando yekubvumidzwa.
Isu tinoita izvi tichishandisa IVA bvunzo. Tine chete inoshandirwa yakavanzika IVA nzvimbo yekuyedza muUK, zvichireva kuti mota yako haizomirira nzvimbo yekuyedza panzvimbo yehurumende yekuyedza, izvo zvinogona kutora mavhiki, kana isiri mwedzi kuwana. Isu IVA tinoedza vhiki yega yega pa-saiti uye nekudaro tine kukurumidza kutendeuka kuti mota yako inyoreswe uye muUK migwagwa.
Motokari yega yega yakasiyana uye mugadziri wega wega ane akasiyana masisitimu ekubatsira vatengi vavo kuburikidza nemaitiro ekutumira, saka ndapota tora quote kuitira kuti tikurukure iyo optimum kumhanya uye mutengo sarudzo yemamiriro ako ezvinhu.
Mota dzeAustralia dzinogona kuda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira iyo yekumhanyisa kuratidza kuverenga kweMMP uye yekumusoro fog mwenje yekumisikidza kana isati yatenderana pasi rese.
Isu takavaka bhuku rakakura remagadzirirwo uye mhando dzemotokari dzatakaunza kunze kwenyika kuitira kuti tikupe fungidziro chaiyo yezvinozodiwa nemota yako kuti igadzirire bvunzo yayo yeIVA.
Mota dzinopfuura makore gumi dzine mhando yemvumo inoregererwa asi dzichiri kuda bvunzo yekuchengetedza, inodaidzwa kuti MOT, uye zvakafanana kugadziridzwa kune IVA bvunzo isati yanyoreswa. Magadzirirwo acho anoenderana nezera asi anowanzo kune reshure mwenje wefog.
Kana mota yako yadarika makore makumi mana haidi bvunzo yeMOT uye inogona kuunzwa yakananga kukero yako yeUK isati yanyoreswa.
Iwe uri kutamisa mugari kubva kuAustralia?
Huwandu hukuru hwevanhu vanosarudza kudzosa mota dzavo kubva kuAustralia vachishandisa mukana wekukurudzira usingabhadharisi unopihwa kana vatama.
Tinogona kubatsira mukutarisira mota paunenge uri mukufamba. Kana iwe wakasarudza kutumira zvinhu zvako pachako pamwe chete nemotokari yako mumudziyo mumwe chete isu tiripo kuti titore mota yacho pachinzvimbo chako.
Uine nyanzvi yakatsaurirwa mumba TOR, tinogona kubatsira nechikumbiro chako chekuchinjisa pekugara kana iwe uine chero nyaya.
Kunetsekana nezvekuti mota yako inyoreswe chimwe chinhu chatinoda kuve nyore kwauri. Usanonoka kupinda mukubata zvine chekuita nemimwe mibvunzo nezve maitiro eTOR.
Kuti uwane zvimwe nezve Kutamiswa kweResidence rubatsiro tarisa chinongedzo pazasi!
[ucaddon_uc_discount_flipbox product_name=”TOR Vehicle Imports” heading="Unoda kupinza mota yako pasi pechirongwa cheToR?" para=”My Car Import vari pano kuti vabatsire nezvese kubvisa kushushikana nekuunza mota yako kuUnited Kingdom. Usazeze kubata kuti uwane kotesheni uye imwe nhungamiro pamusoro pekupinza pasi pechirongwa cheToR. " btn_text=”Tora quote ” product_img=”14006″ primary_color=”#f3f3f3″ price_background=”#333″ price=”” back_background_color=”#333″ link=”https://mycarimport.co.uk/contact” uc_fonts_data =”JTdCJTdE”]
Ndokumbira utarise kuti tinogona kubvuma kubhadharwa nemadhora ekuAustralia ekutamisa vagari kuti vape mutengo wakanakisa wemari paunenge uchipinza mota yako kuUnited Kingdom.